Last updated: Chivabvu. 23 2019 | 3 Maminitsi verenga
Zvaari wingwoman chinhu chinokosha basa! Unofanira kuva nechokwadi chokuti uri kuvaka chivimbo uye ainhonga nhindi dzose imwe zvinofambidzana. Asi ndizvo shamwari iri uye tinotarisira vaizoita zvakafanana kana uye kana shangu dziri dzimwe rutsoka. Ndaisa pamwechete mazano asi ndinofunga chero wingwoman kukosha kwake munyu anoziva pane zillion zvakawanda. Neimwe nzira Ndinofunga chero wingwoman anoziva kuti tiri vanogara vachidzidza kubasa – uye kunyange ndabhadharwa!
Shamwari yako iri kuenda kunosangana vamwe zvinotyisa vanhu munzira. Zvinosuruvarisa kuti upenyu. Asi paunenge hamugoni kuita chinhu pamusoro kuti unofanira kuva ikoko kutsemuka vhura Ben & Jerry mushure uye kungova ikoko kwavari. Onai kuti vanoziva kuti havana kururama uye kuti ivo Muchasangana munhu nani akakodzera kwavari munguva yemberi. Zviri pachena kana vati zvizhinji utsinye zvinhu yokuzorora-iwe zvimwe kuenda kuburikidza vamwe izvi zvakadzama kana kungoti teerera. Nokuti tanga kukuvadzwa vachava vanofanira kuwana kuti kubva hurongwa hwavo. Oh uye zvachose kuva asina kunaka aimbova!
Ndinoyeuka kamwe kunzwa boka shamwari kutaura uye kunzwa mumwe musikana kutaura kuenda kumba nomukomana aiva zvishoma creepy usiku asati. Zvinofadza akanga mhosva asi iye akatambura zvishoma kubuda mumba make zuva rakatevera. My kuita pakarepo akanga nei mumwe wavo kuenda naye kana aiva zvishoma creepy kana ravaifanira kuva shamwari? Ndinofunga kuti kuva omei nokuti zvakaoma kurega pachako mumba mukomana wacho kana usina vakakokwa asi ndinofunga pachako kana ndakafunga mumwe wangu aienda kumba aine zvinokambaira wandingada edza wangu chakaomesesa kunyange kana vakafunga ndakanga ndazara kupinda uye kurara pamusoro pasofa! In kukundikana ndingada kuti nechokwadi kuti pafoni kwavari kuona kana vakanga mhosva. Zviripachena kutya ndechokuti ungafunga uchasvika mhiri-wokudzivirira asi ndinofunga nokufamba kwenguva shamwari vachaziva muri kuita kuti avo vakachengeteka. Uye zviri nani kupfuura zvingaitwa chii chingaitika shamwari yako uye chii zvinosuwisa saka kazhinji anoita.
Kuva Essentials On Kutsigira-By
Ndicho rinorema ikakuruma zvakaitwa yapfuura chikamu. Zvino pachipiriso mafaro zvinhu! Chero wingwoman anoziva kuti uchada wedzerai enyu make-kukwira, bvudzi brushes, mizinga, nezvimwewo … pamusoro chemwenje-ne. Kuti nzira kana kana wenyu anoona munhu waunoda unogona zvose mugove pamwe chete zvinhu mumwe angadai kukanganwa kuti kutarisa imwe knockout uye mupfungwa kuti rinokosha munhu.
Handisi unofanira kuva Oscar-akakodzera kana chinhu chakadai. Ini handigoni kuita mabhatani asi nokufamba kwenguva uchadzidza kuita kuti uchida kana usiri kunyanya. Chinhu pamusoro vanhu pavanenge vanoda mumwe munhu (Uye hapana mumwe wedu anogona diff munhu nokuti isu takaita zvose imomo!) ndechokuti vanotaura nezvazvo zvokuti. Uye iwe hausi kwazvo kufarira zvose vanoti nguva dzose asi nokuda kworutivi unongofanira kuva kunyemwerera uye interject namashoko akafanana “kwazvo?”, “Oh muchitonhorera.”, “Hongu, saka da” uye unofanira kuva vakanaka. Ndivo vafarire kutaura munhu vacharamba kunyange cherechedzai.
Iva Available To Taura
Kana uri kushanda kana chero panguva zvasiyana. Asi kana chiri chinhu kuti uri kuita kuti anogona kumirira nguva dzose isa shamwari yako pakutanga kana vachida ane chikuru nyaya kuti vanofanira kutaura kwamuri pamusoro. Kana vari kuita nguva dzose uye haukwanisi takaita chimwe chinhu kana vakaramba kuita zvakafanana kwamuri kudzokera ungafanira uongorore zvakare kuti asi kana uine ushamwari hwakanaka ipapo pavo, chenjererai kwavari uye haukwanisi zvechokwadi kuita chero kupfuura kuva wingwoman yakanaka kana shamwari.
Ndiani inoti Zvausingakwanisi Kurumidzai Love?